vendredi, 12 juillet 2019 12:00
Ny voalohan-teny dia ny miondrika manoloana ireo namoy ny ainy nandritra ny fiaraha-mientana ho fanohanana ny Ekipa Malagasy Barea an'i Madagasikara. Mankahery ireo fianakaviana.
Ampanetren-tena kosa no hiarabana feno ny Ekipam-pirenena Malagasy, ireo mpilalao rehetra tsy misy hanavahana, na ireo niakatra kianja, na ireo natao fiandry. Arabaina manokana ihany koa ny mpanazatra, ireo mpitsabo, ireo mpikarakara, ary ireo Ray aman-dreny, na nitantana ny federasionina, na ny tany amin'ny kilioba niangan'ireny mpilalao ireny.
Tsy adino ihany koa ny nipoiran'ny Barea, na ireo namorona anarana, na ny ao amin'ny CAF.
Tsy hay tanisaina fa atao moro-bilany indray manodidina, ka dia "Misaotra Barea" no mamintina azy.
Omena fisaorana manokana kosa ny Filoham-pirenena sy ny minisitry ny tanora sy ny fanatajahan-tena, sy ny ao anivon'ny governemanta, ary ireo mpiara-miasa rehetra aminy, ny fianakavian'ny Filoham-pirenena, ireo mpitandro ny filaminana, lehibe tsy ary tanisaina ny ezaka sy fanohanana nataonareo, fa dia fehezina amin'ny hoe "Misaotra Barea".
Izay no ela, andrasana tsy ho ela eto an-tanindrazana ireo maherifontsika, ary atokisana fa dia fitsenana lehibe no miandry azy ireo eto an-toerana.
Tsara raha omena medaly manokana izy ireo, mety misy amin'izy ireo no tsy hanohy lalana miaraka amin'ny Barea intsony, na ny taona efa mihamandroso fotsiny ihany aza, fa azo antoka fa voamarika ao amin'ny fon'izy ireo ny tantaran'ny Barea.
Tsy andiso ahy angamba isika raha ilaza, fa amam-polotaonany maro izay no tsy nahitana fiaraha-mientana goavana toy izao teto amin'ny firenena, eny na ny fankalazana ny fetim-pirenena aza tsy nafana noho izao fiaraha-mientana nanohana ny Ekipa Barea izao. "Misaotra Barea".
Hita tokoa ny firaisam-pirenena, ny fifandeferana, ny fifankaherezana, ny fifankatiavana teo amin'ny rehetra, na ny Malagasy na ny vahiny mpiara-monina amintsika, sy ireo firenena miara-miasa sy manodidiana antsika.
Hita ihany koa ireo Malagasy maneran-tany izay tsy nitandro asasarana nifanohana amin'ny lafiny rehetra. "Misaotra Barea".
Anatra lehibe nomen'ny Barea sy ny Vahoaka Malagasy ho an'ny mpanao politika ireny. Mila firaisan-kina ny vahoaka, mila ny fijoroan'ny Firenena eo anatrehan'izao tontolo izao, mila fampiraisana ireo Malagasy maneran-tany, tsy misy avakavaka, na ara-poko, na ara-pinoana, na ara-piaviana, na metisy na tsia, na mahay teny malagasy na tsia, na manambady vahiny na tsia.
Nasehon'ny Barea ihany koa fa manana tanora mahay isika, na ny mipetraka any ivelany, na ny monina eto Madagasikara, ary samy vonona ny hanome ny fahaizany tanteraka rehefa ho an'ny Tanindrazana. "Misaotra Barea".
Mitodika manokana amin'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina aho, niaina nivantana ny fiainan'ny Ekipa Barea ianao, tena nahavita tokoa, ary tamin'ny fonao tanteraka no nanaovanao ireny. Azoko antoka fa nitondra lesona goavana sy nampihetsika ny ambom-ponao tanteraka ireny fizotran'ny lalao sy fifaninana ireny.
Tari-kevitra fotsiny ny ahy, fa tsy manana ny fahendrena tanteraka akory, tohizo ny fampiraisana ny vahoaka Malagasy, ampiroboroboy ny fiaraha-mientana naterak'ireny Barea ireny. Kolikoloy ny fiarahana miombona ka anomezana toerany ambony ny fahaiza-manaon'ny rehetra, na Malagasy monina eto an-toerana, na ireo mipetraka any ivelany, na ireo vahiny miara-monina amintsika, na te hiara-hiasa amintsika.
Farany nefa tsy kely, soso-kevitra ny ahy, ajanony aloha io fifidianana Ben'ny Tanàna io, tsy izay no mahamaika, ny antony dia tsotra, tsy resy lahatra intsony amin'io demokrasia ezahina ampiharina eto amintsika amin'io endriny io intsony aho, ady lahy hatrany no aterany, izay manam-bola hatrany no mandresy, miteraka fisaraham-bazana hatrany, mivadika ho fifankahalana hatrany, satria izay mitondra dia sarihan'ny mpanohitra hihemotra, dia rehefa tonga eo indray ny mpanohitra, dia gadrainy avokoa indray sy enjehiny ireo nitondra teo aloha, dia mifamadibadika eo hatrany ny fifanejehana.
Tsy alavaiko ny resako, fa antsoy andriamatoa Filoha, ny rehetra hifandinika, hipetraka ambony latabatra hitondra ny eritreritry ny maro, efa manana ny vina nifidianan'ny Malagasy anao ianao, tsy misy andiso an'izay, mety manana ny politika efa noeritreretinao hanatanterahina izany, tsy misy mandà an'izay, fa ny hevitry ny maro maha-takadavitra, ny akanga maro tsy vakin'amboa, ka tsy maintsy ahita vahaolana aingana miaraka ny rehetra.
Tsy fiaraha-mitantana na fizarana seza no tanjona, tsia, ianao no mitondra ary nanakinan'ny vahoaka Malagasy ny andraikitra, ento amin'ny eritreritrao, fa ampiraiso ny Malagasy rehetra.
Efa lany moa ny Solombavambahoaka, manana ny maro an'isa ny antoko politika manohana anao andriamatoa filoha, tsy misy tsy nitaraina ny toetra nasehon'io andrimpanjakana io hatramin'izay, tsy ny olona no olana fa ny rafitra mihitsy, ka aza atao mitovy tamin'ny teo aloha ihany, aza atao feon'olon-tokana no hipoitra ao, eny na ny fandrafetana ny birao maharitra sy ny kaomisionina aza.
Ny firariako dia ny hiantsoana ny rehetra andinika io Lalampanorenana io, izay fototry ny lalàna rehetra eto amintsika, ny rehetra dia mahita ny tsy fihetezana amin'izy io, ataovy ny dinika isam-paritra, ary tena ny hevitry ny olona no alaina fa tsy atao saritsariny, ka zavatra efa vita mialoha no atao fehin-kevitra avy eo.
Ataovy "Assemblée Constituante" na "Antenimiera mahefa" io Antenimieram-pirenena vao lany io, hanapaka farany ny volavolan-kevitra azo avy amin'hy fikaonan-dohampirenena, ary aorian'izay vao manao fitsapa-kevibahoaka hanovana ny Lalampanorenana sy hametrahana ny fampandrosoana miainga avy any ifotony.
Mazava ho azy, tsy averina intsony ny fifidianana Filoham-pirenena sy ny Solombavambahoaka.
Amin'izay no anomezana fahefana tanteraka ny Kaominina, ny Fokontany ho fototry ny fampandrosoana ny Faritra rehetra.
Ny eo amin'ny lafiny ara-toekarena, izao fientanana izao dia azo ampiasaiana hanaovana antso ho an'ny rehetra, mba ho fientanana ara-bola, ka hiantsoana ny Malagasy rehetra, na ny eto an-toerana, na ny any ivelany, na ireo vahiny monina na mpiara-miasa amintsika any ivelany, andray anjara amin'ny famatsiana ara-bola tetikasa lehibe eto amin'ny firenena, na eo amin'ny resaka angovo izany, na resaka fizahan-tany, na ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, na ny fanaovana autoroute manodidina an'i Madagasikara, na ny resaka fitrandrahana sy resaka solika, ny fambolena velaran-tany goavana, ny fiompiana, ny jono, ny fikajiana sy fitrandrahana ny ala.
Io vola io dia ahazoan'ny tompony zanany omena antoka (rémunération garantie), na entina amatsiana vola ireo tetik'asa voafaritra izay mety anatsarana ilay tetikasa Fihariana amatsiana ireo tetik'asan'ny tanora te hamorona orinasa.
Azo atao ny mampiasa io vola io ananganana Banky Malagasy, hamatsiana vola ho an'ny tantsaha, ho an'ny fitrandrahana andranomasina, ny indostria sy ny asa tanana, ny varotra sy ny maro hafa.
Amarana ny resaka, dia betsaka ny asa miandry antsika Malagasy, tsy vitan'olondrery izany, hitatsika tamin'ny ezaka nataon'ny Barea, mampihetsika ny ambopo ireny, asio politika maharitra momba ny tanora, momba ny fanatanjahan-tena, tsy ny baolina kitra ihany no mampahiratra antsika fa eo koa ireo taranja hafa, aoka asiana sekoly hanofanana ireny Atleta sy mpilalaontsika ireny, fanofanana ireo mpanazatra sy mpitsara, fanofanana ireo mpanao gazety misahana ny fanatajahan-tena, fanofanana ireo mpitsabo sy mpitantana kilioba.
Azo eritreretina ny hanofanana ireo tanora mandritra ny 4 taona, ary hanamboarana ireo fotodrafitrasa efa natomboka, na fanamboarana vaovao, ka nahoana moa no tsy isika indray no andray ny CAN afaka 4 taona? Dia ho toy ny mpijery Egipsianina tsy mahafeno stade akory ve isika?
Atomboy dieny izao ny sport scolaire, hakana ireo katita sy tanora mahay, aza asiana kolikoly na fanavahana, fa na avy aiza na avy aiza, dia izay mahay no alaina, omena vatsim-pianarana izy ireo, ary omena karama sahaza azy ny Atleta, satria dia io no asany.
Omeo antoka ny Ray aman-dreny andefa ny zanany amin'ireny sampam-piofanana ireny, ka atoky izy fa ahita fiainana mamiratra ny zanany raha hifantoka amin'ny fanatanjahan-tena izy ireny.
Lalana iray goavana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisongadinantsika amin'ireny fifaninana iraisam-pirenena ireny, na tsy hilaza fotsiny hoe, tsy voavidy vola ny publicité azotsika ataon'ireny fahitalavitra iraisam-pirenena mintatara mivantana momba antsika ireny.
Antoka ampandroso ny fizahan-tany ireny, hampandroso ny famatsiam-bola amin'ireo mpandraharaha vahiny vaventy, ary indrindra ampiray fo antsika Malagasy, izay voalohany tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Firenentsika.
Misaotra BAREA, Misaotra BAREA, Misaotra BAREA.